Afar Arrimood oo laga fahmay go'aankii Trump ee Qudus - BBC News Somali
Image caption Donald Trump wuxuu sheegay in arrintan muddo la qorsheynayay
Halkan waxaa ku eegeynaa falanqeyn ku saabsan waxa laga qaadan karo siyaasadda Donald Trump uu Qudus ugu aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa'iil.
Bil ka hor, diblumaasi sare oo u dhashay Falastiin oo ku sugan Washington ayaa BBC-da u sheegay in uu aaminsan yahay in madaxweyne Trump uu ku guuleysan karo xalka Falastiin iyo Israa'iil, wuxuuna intaa ku daray in madaxdii ka horeysay ay ku fashilmeen.
Kullan kasta, Trump wuxuu xaqiijinayay in "naftiisa u hibeeyay hannaanka" nabadda, ayuu yiri Husam Zomlot, wakiilka ururka xureynta Falastiin (PLO).
Dunida oo si caro leh uga jawaabtay go'aanka Trump ee Qudus
Ururka xoreynta Falastiin ayaa munaasabadda joojiyay ka dib markii uu maqlay waxa uu ku saabsanaa go'aanka Trump ee Qudus. Wuxuu sheegay in aysan ahayn mid habboon in ay dhacdo munaasabadda ayadoo Trump uu Qudus ka dhigay caasimadda Israa'iil.